Hoygii rooxaanta (Muqdisho) Q.1aad - Qalinkii Cabdi Caawiye | Awdalmedia.com
Hoygii rooxaanta (Muqdisho) Q.1aad - Qalinkii Cabdi Caawiye
Mon 24 December 2018.
Yaa Muqdisho sidan ka dhigay?
30 sannadood maxaa xal loogu waayey?
30 kaa sannadood yaa dhibka Ku hayey?
Waxaa sida dayaxa u cad oo lawada ogyahay aduunyada ilaal halka cadceedu kasoo baxdo ilaa halka ay ka dhaco xaalada caasimada u ah ee soomaaliya.
Marka dadku soo xasuustaan ama dhagahooda ay kusoo dhacdo muqdisho Waxaa ogaalkooda iyo malahooda kusoo dhaca qaraxa ama dad tacshiirad lagu furey.waxa kale ogaalka dadka kusoo degdega xukun laysku hayso mooshin laysku boobaayo, saxaafad la toocinaayo, weriye xalay lagu dilay meel uu Ku caweynaayey, askar toogatay dad rayi, qarax lala beegsaday meel hebla.IWM.
Haddaba waxa aan si hoose ugu dhaadhici magaalada aan Ku magacaabay hoygii rooxaanta iyo dhiiga oo aan macnaha uga jeedo meel aan cid wax dilaysa iyo ujeedo ay u dilayso oo cadaana ilaa hadda la garanayn, meel 30 sannadood aan yididiilo fiican aanay kaba soo muuqanayn, kuwa sidaa u galayaana ay yihiin kuwii dadku aamineen ama qaar muwaadiniin iska dhigayey oo xoog ku qabsaday.
Waxa maankayga kusoo dhacay HAL-ABUURKII MAXAMED XASHI DHAMAC GAARIYE midho ka mid ahaa MAANSADIISII DABA-TAXAN
Dambi uu badh leeyahay
Isaguu u daranyoo
Inuu daaro ma ogala
markasta oo loo kaco oo aduunku wax isku geegeeyo waxa bidhaama ifiin la is yidhaahdo waxa soomaaliya u beryey waa cusub oo nabad iyo dagaan ayey heleen. Maalmo ka dib waaba tii oo kasii dartay oo hub iyo aalado wax gumaada la isku helay.waayo dhibaatada waxa wada kuwa xalka wada qaar ka mid ah.
Bal hadda aynu kasoo bilowno markii ay dhacday dawladii KALIGII TALISKII SIYAD BARRE markii ay burburtay, inkstoo ay u nolol iyo mustaqbalba dhaantay dadka rayidka ah ee ay dadka rooxaanta iyo bahalaha noqday ee maalin kasta gumaadaya hooyooyin iyo dhalaan aan ab iyo isir far iyo fikir mid na ku lahayn dilkaa iyo qaraxaa ku dhacaaya.
soomaaliya waxaa ka bilaabmay dagaalo iyo qulqulatooyin sokeeye kasoo ilaa maanta raad Ku leh ta socota. Muqdisho waxay noqotay magaalo lagu cuno unuunka abaydibka iyo hooyada madfucu ka dul heesayey 30 sannadood, waxa ay noqotay god ka mida godadka naarta macnaha dhibka badan ee ka jira awgeed.
Haddaba markii laga takhalusay nidaamkii macangaga ahaa ee SIYAD BARRE AHN ,isagoo kaliya lagama takhalusin ama lama ridine waxa la raaciyey nidaamkii kala dambayntii, wadaninimadii, iyo iimaan qabkiiba. Waxa fadhato iyo bililiqo lugu bilaabay xarumihii dawlada ee uu yaalad asadkii iyo docomentigii dadka soomaaliyeed. Waxa la galay jahan wareer iyo ninkastaaba kii uu godobta uu u hayey ee ay dawladu ka hor taagnayd uu qori caaradii Ku raadsado.
Intaa ka dib iyadoo dhibkaa badani baahay waxaa lagu dhaqaaqay oo la isugu habar wacaday dawlad in la dhiso oo xisiloonidii iyo kala dambayntii lasoo celiyo. Waxaana la dhisay dawlada loogu magac daray SAL-BALAADH oo ah halkii ay kasoo bilaabantay qulqulatooyinka siyaasadeed iyo aargoosiga qabyaaladeed ee ay sodonka sano ay dhex muquuranayso muqdisho iyo inta hoos timaada oo uu madaxweyne ka ahaa GEENERAL MAXAMED FAARAX (CAYDIID) marka hore waxaan soo gudbin doonaa daariikhdii Caydii bilow ilaa dhamaad.
B. YUU AHAA MAXAMED FARAX CAYDIID?
15 Diseembar 1934 – 1 Agoosto 1996) Wuxuu dhashay taariikhdu markay aheyd 1934, wuxuuna ku dhashay Magaalada Beledweyne- ee Gobolka Hiiraan. Wuxuu ahaa nin ka tirsan ciidamada Soomaaliya isla markaan ka mid ahaa Hogaamiye Kooxeed
Iyo madaxweynihii Dawladii SALBALAADH
Wuxuuna ifka uga tagay 14 caruur ah.mahad,saciid.cabdıcasıs.yusuf.cabdirahman
Dhanka Ciidmadda Iyo Xilaalkii UU SOO QABTEY (Military Academy)
Lasoco qaybo badan oo dambe